CH-19 Macmacaan Casaan Macaan (Soosaarid Kaabsi) Shirkadleyda, CH-19 Soosaarayaasha Soosaarida Macmacaanka Cas-Macaan, CH-19 Macaan Casaan Macaan Casaan (Soosaarid Capsiate)
CH-19 Macaan Red Basbaaska Macaan (Warbixiinta Capsiate)
[Waa maxay Capsiate? ]
Kaabista ugu horreysa iyo tan keliya ee leh capsinoids-ka dabiiciga ah ee laga soo saaray CH-19 basbaaska macaan.
[Ku saabsan Wareegtada]
Capsiate, mid ka mid ah capsinoids, waxaa badanaa loo isticmaalaa magac caan ah oo loo yaqaan 'capsinoids' maxaa yeelay waa qaybta ugu weyn ee kaabsinoids-ka laga soo saaro CH-19 basbaaska macaan.
[Asalka Maaddada] Capsicum annuum L. cv. CH-19 Macaan
[Foormulada Mootikooyinka Molecular] C18H26O4
[Miisaanka Maadada Qallooca] 306.18
[Qeexitaannada] 40% ~ 95%
[Habka Assay] HPLC
[Ku saabsan Soosaarida Capsicum Annuum (Soosaarida Caagga)]
Kaabsal waa budo madoow oo cadaan ah ama midab jaalle ah oo laga soo saaray capsicum qalalan. Qaybaha ugu waaweyn waa capsaicin, dihydrocapsaicin, iyo alkaloids kale, sida nordihydrocapsaicin, homodihydrocapsaicin iwm.
[Capsicum Annuum Extract (Kaabis Cajiib ah) Waxqabadka]
1) Capsiate, analogga ku dhaca maqaarka ee 'capsaicin analog', ayaa ah maaddada cuntada caafimaadka iyo daawada. Waxay kordhin kartaa thermogenesis iyo isticmaalka tamarta, waxay dhiirrigelin kartaa dheef-shiid kiimikaadka waxayna xakameyn kartaa isku-duubnaanta dufanka jirka.
2) Capsiate wuxuu muujinayaa firfircoonida anti-oksidheer, anti-bararka iyo kahortagga kansarka, oo haysa awood aad u badan oo ku saabsan faa'iidada caafimaadka cuntada iyo horumarinta dawooyinka.
Capsaicin, waa curiyaha jilicsan ee laga helo basbaaska kulul ee basbaaska taas oo abuurta dareenka gubashada iyo kuleylka dhaca ka dib marka la cuno xitaa qaniinyada yaryar ee basbaaska. Sababtoo ah astaamahan soo socda ee cunitaanka, kaliya qaddar aad u yar oo ah kapsaicin cunto ayaa loo dulqaadan karaa hal mar.
[CH-19 basbaas macaan]
Basbaas macaan oo aan walwal lahayn oo cusub ayaa isha u ah capsinoids, maaddooyinka muhiimka ah ee ku jira Capsiate. Noocan kala duwan ee basbaasku waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay soo saartaa capsinoids, laakiin ku dhowaad malahan wax kaabsool ah.
Capsinoids waa qoys ka kooban iskudhisyo isku mid ah analogyada loo yaqaan 'capsaicin', laakiin aan xanaaq lahayn. Qiyaas ahaan 1,000 jeer ayey ka xanuun yar yihiin ka soo horjeedka 'capsaicin'. Capsinoids waxaa laga soo saaraa CH-19 basbaas macaan, mid gaar ah oo dabiici ah basbaas aan haangsaneyn. Capsinoids waa magac wadar ah oo ay kujiraan kabasho, dihydrocapsiate iyo nordihydrocapsiate.
[COA ee laga soosaaray CH-19 Macaan Casaan Macaan]
Khasaaraha ku saabsan qalajinta: 3.00%
Mesh Size: 100% dhaaf 80 mesh
Bir culus: ≤10ppm
Haraaga cayayaanka: xun
Shirkadeena ayaa siisa dhamaan waxyaabaha kujira. Haddii aad xiisaynayso, fadlan si xor ah u na weydiiso.